Kedu ihe bụ Spam Ngini Nchọgharị? | Martech Zone
Kedu ihe bụ Spam Ngini Nchọgharị?
Tuesday, August 14, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Anyị na-na na a mara mma nnukwu igba n'oge na-adịghị adọ gị aka ná ntị banyere search engine njikarịcha usoro na-aga-eme ka ị na nsogbu. Ọbụna ma ọ bụrụ na saịtị gị anaghị ata ahụhụ taa, Google na-aga n'ihu na-agbanwe ya algorithms ma nwalee ndị ọhụrụ ga-ejide gị echi. Ekwela ka a nwaa gị iji spam chọọ engines… ọ ga - ejide gị.
a Infographic nyocha by SEO Book na-ejegharị gị site na usoro dị iche iche ị ga-esi zere ka ị ghara ịmịpụta ọdịnaya nke a ga-ewere dị ka spam engine.
Tags: infographicsearch engine njikarịchaInjin njikarịcha nchọta ihespam onye nyochaọchụchọ infographicnyocha spamseo infographicseobook
SocialTV = Vidiyo + mmekọrịta + mmekọrịta
Aug 15, 2012 na 11: 44 AM
Na mmalite gị, ị na-ekwu na infographic “na-ejegharị gị site na usoro dị iche iche ị ga-esi zere nke ahụ
ị naghị ewepụta ọdịnaya nke a ga-ewere dị ka spam engine search. ”
Ma ile anya na ihe osise a na-egosi ihe di iche: ihe eserese a yiri ka a haziri ya ịkwa emo ma ọ bụ ịkatọ echiche niile nke Search Engine Spam - ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ịkwa emo nkọwa Google banyere ya.
Ha na-arụtụ aka, na kọlụm aka nri, na Google na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro niile ọ na-ewere "ọjọọ", ma na-atụ aro na ọ bụ kpọmkwem usoro ndị a mere ka Google nwee ihe ịga nke ọma. Karịsịa na ala nke ihe ngosi (“Ah… so spam is…”) na-ada ka ọ na-atọ ọchị nke echiche nke “search engine spam” na / ma ọ bụ na-atụ aro na search engine spam bụ nkwa na irè ahịa Usoro.
Gịnị bụ echiche gị na nke a? You na-ahụ otu ozi ahụ na infographic m na-eme?
Ma ọ bụrụ na otú…. i kwenyere n’ozi ahụ?
Aug 15, 2012 na 12:39 PM
M hụrụ otu ihe ahụ ị mere, Greg. M a bit enyo enyo nke Google si obibia ihe ndị a dị ka nke ọma - ma ha bụ onye isi na anyị ga-eso ha chọrọ… ọbụna ma ọ na edoghi ha akpa.